खेलकुद Archives - A complete Nepali news portal based on news & views
११ माघ २०७८, मंगलवार ०७:३२ January 25, 2022 Nonstop Khabar
काठकाडौं, ११ माघ । क्यामरुनको राजधानी सहर याओन्डेलको एउटा रङ्गशालामा भएको भागदौडमा ६ जनाको मृत्यु हुनुका साथै एक दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन् । सोमबार अफ्रिका कप अफ नेसन्स म्याच हुनु अगाडि सो भागदौड भएको क्यामरुनको सरकारी टेलिभिजनले जनाएको छ । ओलेम्बी रंगशालको प्रवेशद्वारमा सो भागदौड हुँदा दुखद घटना भएको क्यामरुनको सरकारी सञ्चार माध्यम सीआरटीभीले […]
काठमाडौं, ९ माघ । चर्चित क्रिकेट अनलाइन इएसपीएन क्रिकइन्फोले प्रदान गर्ने इएसपीएन क्रिकइन्फो अवार्डको एसोसिएट बलिङको मनोनयन सूचीमा नेपाली टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने परेका छन् । पाँच जनाको मनोनयनमा नामिबियाबाट तीन खेलाडी पर्दा नेपालका सन्दीप लामिछाने र नाइजेरियाका एकजना छन् । सन्दीपले गत सेप्टेम्बरमा ओमानमा भएको पपुवा न्यु गिनीविरुद्धको दोस्रो एकदिवसीयमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ११ […]
आईपीएल अक्सनमा १५ नेपाली खेलाडी, बिक्लान सन्दिप ?
८ माघ २०७८, शनिबार १९:१२ January 22, 2022 Nonstop Khabar
काठमाडौं, ८ माघ । इन्डियन प्रिमियर लिग ( आईपीएल ) को अक्सन फेब्रुअरी १२ र १३ तारिखमा भारतको बैंगलोरमा हुँदैछ। उक्त अक्सनमा नेपालबाट १५ जना खेलाडीले नाम दर्ता गराएका छन्। आईपीएलले शनिवार बिज्ञप्ति जारि गर्दै यो सिजन अक्सनको लागि विश्वभरबाट १ हजार २ सय १४ जना खेलाडीले नाम दर्ता गराएको घोषणा गरेको छ। त्यस मध्ये […]
७ माघ २०७८, शुक्रबार २२:१० January 21, 2022 Nonstop Khabar
पोखरा । प्राकृतिक रुपमा सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखरामा पछिल्लो समय साहसिक खेलका विविध विधा थपिएका छन्। हिमश्रृखङ्ला, ताल तलैया तथा मिलेको बस्तीले सजिएको पोखरामा पछिल्लो समय साहसिक खेलका गतिविधि थपिँदै गएका छन्। पोखरामा प्याराग्लाइडिङ, स्काइ डाइभिङ, अल्ट्रालाइट, हट एयर बेलुन, बन्जी जम्प, जिप फ्लायर, राफ्टिङलगायत उपलब्ध रहेको शहर पोखरामा पछिल्लो समय ‘जायन्ट स्विङ’ पनि थपिएको […]
५ माघ २०७८, बुधबार २३:२३ January 19, 2022 Nonstop Khabar
सशस्त्र प्रहरी बलको नेपाल एपिएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप टी-२० राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। बुधबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा भएको फाइनल भिडन्तमा नेपाल पुलिस क्लबलाई २१ रनले पराजित गर्दै एपिएफ च्याम्पियन बनेको हो। १५८ रनको लक्ष्य पछ्याएको पुलिसले २० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा १३६ रन मात्र जोड्न सक्यो। पुलिसका लागि दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ६५ रन जोडे […]
महिला बक्सिङ्ग खेलाडी तामाङ्गको पीसीआर पोजेटिभ भएपछी उजवेकिस्तान जान पाएन
५ माघ २०७८, बुधबार २१:५२ January 19, 2022 Buddha Sharan
मङ्सिर ५ ,काठमाडौँ। एशियन वक्सिङ्ग कन्फेडेरेशनको निमन्त्रणा एवं उजवेकिस्तान बक्सिङ्ग संघको आयोजनामा यहि जनवरी २० देखि ३०– २०२२ सम्म तास्कन्त शहरमा शुरु हुन गैरहेको एएसबीसी यु–२२ पुरुष तथा महिला बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन छनोट हुन सफल एक मात्र महिला खेलाडी शुष्मा तामाङ्ग (४८ के.जी.) उडान पूर्व हिजो मंगल बार राती पीसीआर परिक्षणमा कोभिड– १९ पोजेटिभ […]
लेवान्डोस्कीलाई बेस्ट फिफा अवार्ड
४ माघ २०७८, मंगलवार ०८:५८ January 18, 2022 Nonstop Khabar
काठमाडौं, ४ माघ । बायर्न म्युनिख तथा पोल्याण्डका स्ट्राइकर रोबर्ट लेवान्डोस्की सन् २०२१ को बेस्ट फिफा अवार्डमा वर्षको उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी चुनिएका छन् । ६९ गोल गरेका ३३ वर्षीय खेलाडीले लगातार दोस्रो वर्ष यो उपाधि जितेका हुन् । उनले लिभरपुलका मोहमद शलाह र पेरिस सेन्ट जर्मेनका लियोनेल मेस्सीलाई पछि पारे । लेवान्डोस्कीले हालैमात्र गर्ड […]
टेस्ट कप्तानबाट विराट कोहलीले दिए राजीनामा
१ माघ २०७८, शनिबार २२:३९ January 15, 2022 Nonstop Khabar
काठमाडौँ– भारतीय टेस्ट टिमको कप्तानबाट विराट कोहलीले राजीनामा दिएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको तीन खेलको टेस्ट सिरिज गुमाएसँगै कोहलीले टेस्टको कप्तानबाट राजीनामा दिएका हुन्। कोहलीले राजीनामा दिँदै भने‚ ‘टिमलाई सही दिशा दिन मैले ७ वर्ष देखि दैनिक कडा मेहनत गरेको थिएँ। मैले आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राखिनँ तर जुनसुकै चिजको कुनै न […]
जोकोभिकलाई अष्ट्रेलियाको भिसा दिन आदेश
२६ पुस २०७८, सोमबार १४:५२ January 10, 2022 Nonstop Khabar
काठमाडौं, २६ पुस । स्टार टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिकलाई भिसा दिन अष्ट्रेलियाको एक अदालतले आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश एन्थोनी केलीले रद्द गरिएको जोकोभिकको भिसा दिन र अध्यागमनको नियन्त्रणबाट ३० मिनेटभित्र मुक्त गर्न आदेश दिएका हुन् । त्यस्तै, उनको राहदानीसहित यात्रासम्बन्धी अन्य कागजात फिर्ता गर्नसमेत केलीले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ । यसअघि कोभिड–१९ […]
एभरेष्ट मार्शल आर्ट्स क्लबका सिनियर खेलाडीका लागि २५ जोर ट्रयाक सुइट प्रदान
२५ पुस २०७८, आईतवार १४:३९ January 9, 2022 Buddha Sharan
पुस २५,काठमाडौँ – एभरेष्ट मार्शल आर्ट्स क्लबका सिनियर खेलाडीहरुलाई हौसला प्रदान गर्न मेटावो पावर तुल्स नेपालका लागि आधिकारिक बितरक Kusum Engineering Enterprises & Trade का प्रबन्ध निर्देशक कुसुम व्यञ्जनकार तथा प्रमुख राजेश प्रधानले खेलाडीहरुका लागि २५ जोर ट्रयाक सुइट उपलब्ध गराईदिनु भएको छ । एभरेष्ट मार्शल अर्तसका खेलाडीहरुलाई नेपाली कांग्रेस प्रदेश प्रमुख क्षेत्र नं ९का […]